Alien: Ọgbụgba ndụ enweworị ụgbọala na-adọkpụ, hapụ ka eburu gị pụọ n'obi | Akụkọ akụrụngwa
Alien: Ọgbụgba ndụ enweworị ụgbọala na-adọkpụ, kwe ka eburu gị pụọ
Afọ 2017 na-ebilite na mbata na nnukwu ihuenyo nke ihe nkiri abụọ nwere ike ịlele tupu na mgbe sagas nke karịrị akarị. Anyị na-ekwu maka ya Resident evil na Ndị ọbịa. Oge a anyị ga-elekwasị anya na ndị ọbịa, ọ bụghị kpọmkwem na ET Steven Spielberg, mana n'akụkụ gbara ọchịchịrị nke ndị njem achọghị. Ridley Scott weghaara uwe ya iji wepu saga a site na nhụjuanya ya, anyị nwere olile anya na ha ga-egbu ya dị ka o kwesịrị. Anyị na-ahapụrụ gị ụgbọala na-adọkpụ nke Ọbịa: Ọgbụgba ndụ ya mere ị nwere ike ịbụ obere ụjọ mgbe ị na-echere ihe nkiri ahụ.
Ihe nkiri a ga-abụ usoro nke ndị nkatọ Prometheus (site na echiche m otu n'ime ihe kachasị njọ na saga, ruo ogologo oge), iji dozie okwu ahụ ma dozie ihe. Maka ndị hụrụ saga n'anya, nke a ga-abụ prequel ozugbo Onye ọbịa: Onye njem nke asatọ, ihe nkiri nke Ridley Scott duziri, otu n'ime ndị nduzi ahụ na-esighi ike ịme ihe ọ bụla na-adịghị mma. Oge a ụgbọ mmiri rutere na mbara ala nke dị anya "nke nwụrụ anwụ" mana ọ bụghị. Michael Fassbender ga-apụta na ọnọdụ ahụ (nke anaghị egosi na ihe nkiri ahụ na-adọrọ mmasị) na-egwu David, onye lanarịrị njem ahụ Nkwado, maka na-erughị afọ 10.
Trailer ahụ ga-ahapụrụ gị ọnụ gị ghe oghe dịka ọ hapụrụ anyị. Nkwusi, ụda, ọchịchịrị na ịgba ọsọ. Have ga-agba ọsọ, n'ihi na ọ bụrụ na ọ bụghị Onye Ọbịa na-aga ịpụta na ị ga-enwe ezigbo oge ọjọọ. Omume na nlanarị nke na-agaghị ahapụ onye ọ bụla hụrụ saga enweghị mmasị, N'ihi na ka anyị chee ya ihu, ọ na-ebu akara aka Ridley Scott, ọchịchịrị, ọkụ ọkụ, na ụfọdụ ndị na-adọrọ adọrọ bụ ndị na-eyighị ka ha maara ebe ha na-abanye.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Alien: Ọgbụgba ndụ enweworị ụgbọala na-adọkpụ, kwe ka eburu gị pụọ
Ngwa YouTube maka PS4 na-enye gị ohere ile vidiyo vidiyo 360 na PlayStation VR
Na December 31 Cyanogen ga-emechi ụzọ ya